FALANQAYN: Romelu Lukaku Iyo SADDEXDII Arrimood Ee Arsenal Ka Caawiyey Guushii Ay Ka Gaadhay Manchester United – Latest Sports News
FALANQAYN: Romelu Lukaku Iyo SADDEXDII Arrimood Ee Arsenal Ka Caawiyey Guushii Ay Ka Gaadhay Manchester United
Arsenal ayaa isku ballaadhisay kaalinta saddexaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska oo ay ka riixatay Manchester United oo laba usbuuc ka haysatay.
Unai Emery ayaa qorshe xooggan ku qaabilay Manchester United, waxaana uu usii diyaarsaday hubkiisa ugu waaweyn ee uu heli karayey, taas oo keentay inuu kubbad-haqaynta iyo halistaba kaga gacan sarreeyo tababare Ole Gunnar Solskjaer.
Arsenal kaliya iskumay hallaynin inay kubadda ka haysato Manchester United qaybtii hore sidii uu yeeli jiray Wenger, hase yeeshee waxay halis ku ahaayeen weerarka oo ay halis galinayeen goolka uu waardiyaha ka ahaa David de Gea, iyagoo khadka dambe ee difaacana ka qabtay shaqo cajiib ah oo sabab u noqotay in weerarka Manchester United ay taaban kari waayaan shabaqooda.
Gunners waxay hadda hal dhibic ah ka hooseysaa Tottenham oo kaalinta saddexaad fadhida, taas oo 16 maalmood ka hor ka sarraysay 10 dhibcood, ayna adkayd in la hiigsado amaba cidi kula gorgortami karto, balse hadda waa mid furan oo Arsenal iyo labada naadi ee ka hooseeyaaba hungurayn karayaan.
Goold awood badan oo ay kubaddu dhinac u jarnayd ayaa uu laacibka khadka dhexe ee Xhaka hoggaanka ugu dhiibay Arsenal qaybtii hore ee ciyaarta, waxaana qaybtii labaad rikoodhe u raaciyey Pierre-Emerick Aubameyang.
Inkasta oo ay qaybtii hore kubadda maamulanaysay Arsenal, haddana qaybtii dambe xoogaa hoos u dhac ah ayaa ku yimid kubbad-haysashadeedii oo ay kala wareegtay Man United, hase yeeshee, waxa shaqo badan qaybtay goolhaye Leno oo ahaa mid shabaqiisa u diiday kubbado halis ahaa oo Lukaku, Rashford iyo xiddigaha kale ee United ku ganeen.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa saddex arrimood oo sabab u ahaa guusha Arsenal ay garoonkeeda Emirates kaga gaadhay Manchester United
1. Dhamaystir-xumada afka hore ee Manchester United
Romelu Lukaku rikoodhkiisii lixda gool ahaa ee saddex kulan gudaheed ayaa uu kasii kordhisan kari waayey, waxaana uu mar kale noqday mid dhalintu ku adag tahay oo fursadaha uu helana khasaarinaya, iyadoo uu marar badan lumiyey jaanisyo uu ku taaban lahaa shabaqa goolhaye Leno.
Arsenal way ogayd in haddii ay fursad siiyaan Lukaku iyo asxaabtiisa sida Rashford ay goolal ka dhalin doonaan, siddaas daraadeedna waxa shaqadooda qabsaday Koscielny iyo Sokratis oo kaashanaya xiddigaha baallaha iyo dhexda oo ay tiir adag ku ahaayeen Xhaka iyo Ramsey.
Gool la’aanta ay Manchester United dhigeen, waxay Arsenal ka saartay inkaartii xilli ciyaareedkan haysatay ee ahayd in lixda kooxood ee waaweyn ay ku casuumi jireen goolkooda oo aanay hal kulana shabaq nadiif ah kala bixin, balse ugu dambayn Man United ayay ka diideen inay soo gaadhaan.
Weerarka Manchester United inkasta oo ay shaqeeyeen, laba jeerna kubadda ku dhufteen birta, haddana marka la eego fursadaha ay helayeen iyo sida aanay uga faa’iidaysanin, waxay muujinaysaa in xalay ay ahaayeen kuwo liita, gaar ahaan Romelu Lukaku oo dhawr fursadood helay iyo Rashford oo qaybtii labaad helay fursad weyn.
Paul Pogba ayaa sameeyey fursado badan, laakiin isaguna wuxuu gaabis ka noqday inuu xaashida dhalinta isku daro.
Guji 2 & 3 si aad u wada akhrisato warbixinta